Ukucaciswa okuphambili kweHuawei Mate 30 Pro kuyavela | I-Androidsis
Ukucaciswa okuphambili kweHuawei Mate 30 Pro kuyavela
Kutshanje iHuawei isungule iifowuni eziphambili P30 kunye neP30 Pro. Ukuphumelela oku, inkampani yaseTshayina kulindeleke ukuba ibhengeze Uthotho lweHuawei Mate 30 kweyeDwarha kulo nyaka.
I-Mate 30 Pro iya kuba yeyona nkampani inamandla kwifowuni, kuba iya kuxhobisa i-chipset elandelayo yenkampani, eyiyo eya kuthatha indawo yale ikhoyo ngoku Kirin 980 njengoyena unamandla. Kwaye sele sinedatha kwiinkcukacha zayo eziphambili. Bazi apha ngezantsi!
Imithombo yamashishini ikutyhile oko I-Mate 30 Pro iya kunikwa amandla yi-chipset Kirin 985 7 nmIprosesa yefowuni yesizukulwana esilandelayo sikaHuawei yokufika isekwe kwinkqubo yokuvelisa i-EVC. Ukuxhasa uxhulumaniso lwe5G, i-SoC iya kubandakanya imodem I-Balong 5000 5G.
El Umlingani 20 Pro Inesikrini se-OLED esingu-6.39-intshi. Nangona kunjalo, umntu oza kungena ezihlangwini zakhe unokuza ne Ikhusi le-OLED enkulu ye-6,71-intshi, eya kuthi ibonelelwe yi-BOE. Kulindeleke ukuba igobe kumacala omane, kodwa ezinye iinkcukacha, ezinje ngesisombululo sescreen, azikabikho. Kuhlala kubonakala ukuba iHuawei ivula i-perforations kuyo okanye enye uyilo lwescreen, nokuba ayitsaliwe okanye hayi, kuzo zombini i-Mate 30 kunye ne-Mate 30 Pro.
I-Mate 20 Pro ixhasa ukuvulwa kobuso be-3D. Akukho lizwi malunga nokuba inkangeleko yobuso obuphambili iya kufumaneka kwi-Mate 30 Pro. Silindele ukuba iza kufika kunye nomfundi osesikrinini ofunda ngeminwe.
Ngakolunye uhlangothi, I-Mate 30 Pro iya kuqhayisa ngokuseta ikhamera ye-quad, nangona kungekho kwaziwa malunga neenkcukacha zayo. Nangona kunjalo, into eyaziwayo kukuba iyakuxhotyiswa nge-3D ToF (Ixesha leNqwelomoya) kunye nokuba uyilo lobumbeko lwekhamera luya kufana nolo lwe-Mate 20 Pro. ifumaneke kwi-Mate 30 Pro, eya kubandakanya iisenzi zekhamera ezine kunye nesibane se-LED embindini.
I-Huawei Mate 30 Pro yayiza kufika ineekhamera ezintlanu zangasemva, ngokwesicelo selungelo elilodwa lomenzi
Kukwathethwa njalo ukuba iselfowuni inokufika ngebhetri le-4,200 mAh, ebonakala ngathi iyadanisa, ithathela ingqalelo into yokuba iya kuba yi-smartphone enkulu. Oku kuya kuhambelana netekhnoloji ye-55W SuperCharge, ekwafumaneka kwi-smartphone yokusonga Umtshato X.
Ukugqiba, I-Mate 30 Pro iya kuba nenkxaso ye-10W yokutshaja ngaphandle kwamacingo. Akukho lwazi kwixabiso le-smartphone.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukucaciswa okuphambili kweHuawei Mate 30 Pro kuyavela
I-LG G8 ThinQ inqaku lekhamera esezantsi kwi-DxOMark
I-Realme X kunye neRealme X yoLutsha yoHlelo ziya kukhutshwa nge-15 kaMeyi